ကလိုစေးထူး: ဘတ်စ်ကားများ ...
Posted by ကလိုစေးထူး at 8:05 PM
ဟုတ်ပါရဲ့ ကိုသံလွင် …
ကျမလဲ ဘတ်စ်ကား စပယ်ယာတွေကို တကယ်ချီးကျူးတယ်။
စကားလုံးအသစ်အဆန်းတွေလဲ သူတို့ သိပ်ထွင်တတ်တာပဲ။
တခါတခါ ဘတ်စ်ကားကျပ်လို့ စိတ်ညစ်နေရင်တောင် သူတို့စကားတွေလိုက်နားထောင်ပြီး ရယ်ရလို့ ခဏတဖြုတ် စိတ်ချမ်းသာခဲ့ရတယ်။
၅၁ လိုင်းကားကို အစအဆုံး ၂ ခေါက်လောက်စီးရုံနဲ့တော့ စာအုပ်ထုတ်လို့ မရလောက်သေးဘူးထင်တယ်နော်။
ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ကိုသံလွင်က မြန်မာပြည်ဘတ်စ်ကားလောကနဲ့ ကင်းကွာနေတာ ကြာပြီမဟုတ်လား။
တလ ကိုးသီတင်းလောက် ရှိသမျှ လိုင်းပေါင်းစုံ လိုက်စီးကြည့်နိုင်ရင်တော့ စာအုပ်ထုတ်နိုင်လောက်ပါရဲ့။
ဘယ်လိုလဲ .. အပင်ပန်းခံနိုင်ပါ့မလား။ :P
Nov 16, 2006, 1:52:00 AM
ရန်ကုန် တစ်ခါ ပြန်ပါတယ် ဘစ်စ်ကား စီးရတာလွယ်ဘူး ကိုကြီးရေ
Nov 16, 2006, 6:33:00 AM
Don't say I am not reading your blog and don't write any comments.
I always visit your blog and I like all of them.I just leaving without writing comments. You may understand :)
Nov 16, 2006, 6:34:00 AM
လက်တို့တောင်းရင်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ် ဆိုတဲ့ခေတ်မှာကျနော်မြန်မာပြည်ကို ခွဲခွာခဲ့တာပါ။ အခုဘယ်ခေတ်ရောက်ပြီလဲမသိတော့ဘူး။
Nov 28, 2006, 5:47:00 AM